Taratasin’i Bida mpivaro-mangidy hanamamy ny fiainanao - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Bida no anarako, ny raibenay no nitondra anay niakatra an’Iarivo talohakelin’ilay sahotaka nisian’ny faty olona sy hain-trano iny. Mety tany ho any amin’ny taona 2009 tany izy izay fa tsaroako fotsiny hoe nandeha be ny tsena mangidin’i dadabe satria niverina in-telo na in’efatra izy isan’andro mameno siny, izany hoe mety nahatratra 100 litatra mihitsy izany no lafo. Raha ny filazany dia sivy taona aho tamin’izay fotoana izay. Tsy nandia fianarana aho na niditra lakilasy izany fa dia vitan’ny niandry omby sy nanondraka anana no asako tany ambanivohitra. Izay indrindra no antony nitondran’i dadabe aho niakatra fa sady hanampy azy no hiavo-tena ihany koa. Hiakatra an’Iarivo izany tamiko dia nofinofy tokoa satria tambanivohi-dahy no hianatra hiampita arabe eo Analakely. Hendratrendratra ihany aho tamin’i dadabe nitsena ahy teny amin’ny “Fasan’ny karana” toerana fiantsonan’ny fiarakodia. Vao tonga teo aho dia nanontany azy hoe “aiza ilay fasan’ny karana fa toa tsisy fasana mihitsy tazana ety ho ety ?” Dia namaly dadabe hoe karazana karana dorana no entina aty dia misy toerana natokana ho an’izany. Akory ny hagagako raha natorony ahy ilay toerana fandorana ireo karana maty fa hay toerana mahafinaritra, tsy hita soritra hoe feno molaly toy ny tao an-tranonay izay sady fandrahoana sakafo no fandrahoana hanin-kisoa. Hoy aho tany an’eritreritro tany hoe karana mihaja zany angamba tsy manetroka rehefa maty fa dia levona ho azy.
Roa taona izay no maty dadabenay, izany hoe feno 18 taona aho tamin’izay, soa ihany fa vitan’i dadabe ny nanao ny karapanondroko fa raha tsy izany dia asa izay natao. Voatery nandimby tsy satry ny fivarota-mangidy aho satria izay rahateo no efa notezain’ny dadabe sady nanampiako azy. Dia akory atao, hoy ilay fitenin’i dadabe izay fa dia efa ity varo-mangidy ity no fivelomany dia hitako fa nahavelona azy tokoa dia hiezahako io. Fony dadabe mbola nanao an’io asa fivarota-mangidy io, izay raha ny filazany dia efa tamin’izany andron-dRatsiraka izany izy no nivarotra mangidy, izany hoe efa 30 taona mahery dia nahavelona azy ny asany. Nisy radio sy televiziona kely tao an-trano, nanana efitra manokana fandrahoana mangidy izy, nisy vata kely izay koa fasiany ny akanjony sy izay mombamomba azy, nisy sobika iray izay koa fametrahany ny vary izay matetika vary avy any ambanivohitra foana. Tokantrano tsotra toa izay no nolovaiko tamin’i dadabe teny Andravoahangy teny. Mpangarom-paosy sy ny mpanao sinto-mahery no mpandalo matetika eo anoloan’ny tranoko, izay arahina polisy matetika. Nisy fotoana aho natahotra sy nivarahontsana mihitsy rehefa sendra azy ireny mihazakazaka enjehin’ny polisy, saingy zatra ihany rehefa ela ny ela.
Rehefa miasa aho dia matetika mahavita 10 na 15 kilometatra isan’andro mitondra siny misy mangidy. Voatetiko daholo hatreny Anosy, Mahamasina, Analakely, fa indraindray aho tonga hatreny Ambohimanarina sy Analamahitsy sy Besarety. Haiko daholo ny anaran-tanàna eto Iarivo, sady efa nisy natoron’i dadabe koa fony fahavelony. Rehefa misy fety eo Mahamasina, na eny Antsonjombe, na koa eny Anosibe dia mandeha be ny varotra, mahalany 60 litatra aho indraindray satria siny roa no entiko miampy tavoahangy telo na efatra. Amin’ny fotoan’ny ririnina dia mandeha kely ihany fa tsy dia mahalafo mihoatra ny 30 litatra aho. Matetika dia 3500 na 5000 ariary eo no vola matiko indray andro rehefa mandeha tsara ny varotra, misy fotoana anefa zara raha mahazo 2000 ariary ihany koa. Io ilay tenenin’i dadabe hoe l“akalaka ry ilay kely ity ny varotra !” Fa efa antom-pivelomana ny varotra mangidy dia tsy maintsy atrehina.
Noho ity asa mandehandeha ity dia lasa nanana namana maro aho, ary lehilahy no ankamaroany, misy amin’izy ireo mpivarotra kafe mandehandeha toa ahy, misy mpivarotra eny Analakely sy Andravoahangy, misy sôferan’ny taxibe, fa misy ihany koa mpiasa birao, ireny mpitaky haban-tsena ireny, na koa ireny mpiasan’ny hôpitaly eny Isotry ireny. Rehefa mandalo eny aho na tsy miantso aza izy ireo dia manatona avy hatrany aho, misy tsy manome ilay arizato (100 ariary) eo no ho eo fa atambany dia amin’ny fandalovako manaraka aho no omeny. Nifankahalala izahay noho ny mangidy ! Misy aza ny sasany miantso ahy mihitsy hoe mangidy ! Tamin’ny voalohany sorena ihany aho nantsoin’ny olona hoe mangidy, fa tsy nampaninona ahy izany taty aoriana satria hay moa dadabe koa nantsoin’ireo olona ireo hoe mangidy nandritra ny taona maro.
Tojon’ny tsy nampoizina aho ankehitriny noho ity aretina malaza be eran-tany ity dia ilay antsoin’ny olona hoe kovadisy (coronavirus) ity. Miteny isan’andro amin’ny radio ny Filoha Rajoelina mampahafantatra ny zava-misy sy ny isan’ireo voan’io aretina io. Rehefa mba sendra manam-potoana mijery vaovao amin’ny televiziona aho dia akory ny hatairako mahita ireo olona an-jatony maro miara-maty vokatry ny kovadisy. Tamin’ny voalohany dia hoy aho hoe aretim-bazaha io fa tsy mahavoa ny malagasy, indrindra fa ny malagasy mahantra sy farahidiny toa ahy. Miezaka mody any an-trano manenjika ilay fanambarana ataon’ny Filoha aho rehefa amin’ny 8 ora alina iny, mientanentana ny foko maheno fa mitombo tsy miato ny isan’ireo voan’ny kovadisy. Dia hoy ny saiko kely tsy mahalala na inona na inona ity hoe, dia ho sanatria ho an-jatony no ho faty isan’andro eto Andravoahangy ve ? Fa hatramin’izao anefa dia tsy mbola naheno aho hoe nisy maty ireo voan’ny aretina. Mahay, hoy aho ny dokotera malagasy e ! Tsy misy dikany amin’ireo dokotera malagasy izay kovadisy, fa sady mankahery tena ihany aho ! Ny tahotra anefa efa mby an-koditra.
Fa lasa ny saiko sy ny eritreritro omaly ary tsy nikipy mihitsy ny masoko ny alina ! Sao mba afaka hitondra izay anjara birikiko aho amin’ny fiarovana ireto malagasy toa ahy amin’ny alalan’ity mangidy amidiko ity ! Ny dokotera aloha raha fantany izany tonga dia ampisamboriny polisy aho, natahotra indray aho teo, nefa hoy ny tao an-tsaiko hoe tsy maminona izany fa hanao fikarohana foana aho, na ho fiarovana ho ahy aloha no ataoko.
Ravintsara, vonenina ary asiako fanazava sy fakantsilo no fampiasako hatramin’izay, io no hafatr’i dadabe hoe aza ovaina mihitsy ireo fangaro ireo, na raha hanampy ise, hoy izy, dia asio fanazava kely fotsiny. Tonga tao an-tsaiko koa fa izay olona mpisotro mangidy tamiko dia nilaza fa nahasalama azy ireo ny mangidy entiko. Misy mihitsy aza nanome ahy vola 5 arivo ariary indray andro izay fa sitrana hoe izany diabeta taminy izany, nisy koa nilaza fa afaka ny farasisa taminy, sy ny maro tsy voatanisa. Dia inona no fangaro hataoko hiarovako ny tenako amin’io kovadisy io. Ny mangidy mantsy raha tsy mangidy ny tsirony dia tsy izy izay, izaho anefa tehanafangaro tambavy izay mety tsy ho lasa mangidy mihitsy. Vaky teo ny lohako, sahiran-tsaina aho, ny tahotry ny ho voan’ny kovadisy eo koa, ny asa fivelomana etsy an-daniny toa nihena ny fidiram-bola satria zara raha mahazo 2500 ariary isan’andro satria tsisy olona eny an-dàlana moa matahotra ny mpividy mangidy. Ireo namana mahafantatra sisa no mividy amiko sy ireo nahita soa tamin’ny mangidy. Na te hanafatra tambavy aza tsisy fiara midina mankany ambanivohitra, misy izay ravin-kazo atao hoe nimo (neem) izay anefa mety hanasitrana na hiarovan-tena tsara, any Toliara no betsaka azy io, sady mbola any ny anabavin’i dadabe. Ahoana re no hataoko e, hoy Bida mitan-takolaka toa miteny irery.
Tapidalan-kaleha letsy ialahy ry Bida, hoy izy miteny irery, fa tohizako foana ny asako, hoy indray izy avy eo, asiako katrafay ny aron’ny tambavy andrahoiko, hoy izy fa ny katrafay mantsy mampahatanjaka sy manampy ny hery fiarovana. Dia raikitra tokoa fa nasiany katrafay ny mangidy amidiny.
Te hanafatra fotsiny aho, hoy i Bida, mba ilazao ireo dokotera fa tsy fidiny ho ahy no ho mpivaro-mangidy fa asa nolovaina tamin’i dadabe io, nefa koa nahasitrana olona maro sy aretina maro. Tsy mila fanampiana avy amin’ny mpitondra aho fa ny zavatra angatahiko, hoy izy nanamafy, aza rarana ny olona hisotro mangidy.